Ngwá Ọrụ Ngwá Ngwá Ọrụ Ị Kwesịrị Ịtụle - Akọwara Site Semalt
Nchịkọta map nke Google bụ ihe dị ọhụrụ, nke dị arọ, ihe dị ike ma dị irè.Ọ na-ewepụta data site na ibe weebụ dị iche iche na map Google na nsonaazụ ya n'ụdị CSV na JSON. Ị nwere ike iji nlezianya chebe weebụsaịtị azụmahịa, nọmba ekwentị na adreesị ozi-e na ọrụ a zuru ezu. Ụfọdụ n'ime atụmatụ ya dị iche iche na-atụle n'okpuru ebe a.
1. Wepụ data na ụdị dị iche iche:
Site na nchịkọta map nke Google, ị nwere ike wepụ obodo, akara zip, ọkwa, latitudes, longitudes, oghere hour, na aha ahịa aha. Onye na-eweputa ihe a na-enyere aka ịgbanye data dị iche iche na-ahazi ma chekwaa oge na ike gị. Ọ bụrụ na ike gwụ gị n'ịchịkọta na iwepụ aka data na aka gị, ị ga-anwale ihe osise Google iji nweta ọrụ gị.
2. A na-enweta ya na mbipụta abụọ:
N'adịghị ka ndị ọrụ nchịkọta ndị ọzọ, ndị nchịkọta map nke Google dị na mbipụta pụrụ iche abụọ: mbipụta mbipụta na mbipụta Demo. Ntupụta mbipụta na-eme ka ị gbalịa ịnweta software a ma nwee ọrụ ya ruo ụbọchị 15. Ụdị mbipụta ya ga-efu gị $ 99 ma kpughepụghị uru na atụmatụ dị iche iche.
3. Ejiri ọtụtụ puku peeji nke ọ bụla kwa ụbọchị:
Otu n'ime ihe ndị kachasị dị iche iche nke nchịkọta map nke Google bụ na ọ na-elekwasị anya ruo na ibe weebụ 150,000 kwa ụbọchị ma na-efu gị ihe maka ọrụ a. Ngwá ọrụ a dị mma maka ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri na-eme ka ọ dịrị ha mfe nyochaa data site na ọtụtụ peeji nke tupu ha azụta ya ụgwọ.
4. Na-akwado usoro dị iche iche:
Nchịkọta weebụ ma ọ bụ ihe nchịkọta data na-echekwa ozi gị na usoro JSON, RSS na CF; ị nwere ike mepee data achọrọ na Excel Ibé akwụkwọ ma ọ bụ bubata ya na Google Drive.
5. Kwekọrọ na a pụrụ ịtụkwasị obi:
E nwere nnukwu ọnụọgụ ngwanrọ data na ngwaọrụ ndị na-akwadoghị ihe nchọgharị ọtụtụ. N'adịghị ka mbubata. Ee na Kimono Labs, nchịkọta map nke Google jikọtara na Windows 7, Microsoft XP, Windows 8 na Windows 10. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-akwado Google Chrome, Firefox, na Internet Explorer ma bụrụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya.
6. Na-egosi nsonaazụ ya n'ụzọ ziri ezi:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-nyochaa ma nọgide na-enwe data dị na ya mgbe a na-ehichapụ ya, ị ga - anwale kaadị map Google. Ọrụ a na-ahapụ gị ka ịlele data ma dozie obere njehie site na ya. Ọzọkwa, ọ na-enye nhọrọ iji tinye nyocha ọchụchọ na isiokwu n'otu oge ahụ.
7. Na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe ma dị mfe:
Nchịkọta map nke Google dị mfe na-eji ma nwee interface interface enyi-onye. Ozugbo ịhọrọ ụdị ma ọ bụ tinye isiokwu na ebe, ị ga-amalite ịchọta ma chere maka ntinye gị maka nkeji ole na ole. Ihe nchịkọta data nke Google dị mma maka ụdị azụmahịa niile ma mepụta faịlụ CSV ozugbo.
8. Wepụ ebe ọ bụla, mgbe ọ bụla:
Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a na amaokwu gị, mbadamba ma ọ bụ usoro kọmputa ma nwee ike ịrụ ọrụ gị n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla. I kwesịghị ichegbu onwe ya banyere ihe ndị ọ rụpụtara. Ngwaọrụ a ga-enye data ziri ezi n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ ị na-eji eme ihe ma dabara adaba maka freelancers na ndị ọchụnta ego. I nwedịrị ike ihichapu ibe odo na ibe ọcha na ozi a Source .